Tusaalooyinka Calaamadaha iyo Xeeladaha Falanqaynta Suuqa | vfxAlert official blog
Tusaalooyinka signalada iyo istaraatiijiyada
Calaamadaha VfxAlert uma baahna rakibida tilmaamayaasha jaantuska.
Calaamad daciif ah oo ka socota vfxAlert iyo dhowr qaab oo isku xigta oo ka soo horjeedka laambadda. Dhaqdhaqaaqa dhinacyada ee suuqa, fur kaliya caqabad ama xulashooyin kaladuwan;
Haddii ganacsade uu arko "Doji" qaabka dib u celinta, ganacsi horey ayaa loo furi karaa. Astaamo vfxAlert xoog leh ayaa la xaqiijiyay PUT-option.
Astaamaha ugu sarreeya ee calaamadaha (cabbirka "Awood") - bilowga hoos u dhac xoog leh. Fur ikhtiyaar ka dib qaab kasta oo Saddex Metod ah.
Bill Williams tilmaame.
Waxaa laga heli karaa dhammaan boosteejooyinka ganacsiga, waxay ka tirsan yihiin qaybta "tilmaamayaasha caadiga ah".
Laba tilmaamayaal ayaa muujinaya bilowga hoos udhaca dheer, xaqiijinta ka timid vfxAlert oo leh calaamado dib u celin ah oo ku saabsan laba wakhti. Ganacsaduhu wuxuu raacayaa isbeddelka wuxuuna furaa ikhtiyaar PUT-ka ka dib dib u soo celinta maxalliga ah iyo xoojinta.
Oscillator Cajiib ah ayaa udhaxeeya heerka eber ee hoose ilaa kor; calaamadda dib u celinta ee vfxAlert oo xoog leh ayaa xaqiijineysa xulashada CALL-ka.
Dhaqdhaqaaqa Celceliska isbeddelka Alligator wuxuu muujinayaa kor u kac xoog leh, dib-u-noqosho calaamadda CCI ayaa xaqiijinaysa CALL-xulashada
Heerarka "caadiga ah" ee isbeddelka dib-u-dejinta ayaa ka shaqeeya dhammaan hantida ganacsiga.
Fursad furan kadib markaad jabiso heerarka 38.2% iyo 50% Fibonacci. Waxaan ku eegaynaa xaqiijinta burburka astaamaha "Awood" iyo "Madax" ee calaamadaha vfxAlert: halkan waa ku filan tahay in la furo ganacsi.
Haddii calaamaddu "daciif tahay", sida sawirka ku jirta, ganacsaduhu waa inuu xaqiijiyaa vfxAlert iyo jabitaanka heerka Fibonacci. Tusaale ahaan, oscillator MACD ah: histogaraamku wuxuu ka sarreeyaa heerka eber, waad furi kartaa ikhtiyaar.
Istaraatiijiyada "Channel tilmaame + Oscillator".
Tilmaamayaasha kanaalka waxay si fiican ugu shaqeeyaan suuq dhinac ah oo leh 20-30 dhibcood.
Ka dib marka calaamaddu soo muuqato, ganacsaduhu wuxuu fiiriyaa booska Stochastic: ka bixitaanka meelaha xad-dhaafka ah / xad-dhaafka ah ayaa loo baahan yahay, ka dibna waxaan sugeynaa qiimaha inuu ka guuro xadka Donchian illaa khadka dhexe. Tusaale ahaan, ka bixitaanka xad dhaafka ah iyo qiimaha xadka kore ee kanaalka - fur PUT-option.
Xaaladaha dib u celinta: ka bixida xad dhaafka ah, qiimaha wuxuu aadayaa khadka dhexe. Furan CALL-xulasho. Kahor intaanay calaamaddu muuqan, waxaa jiray dhibco furitaan ah: fiiri tilmaamayaasha hana dhaafin xulashooyinka!
Istaraatiijiyad "Sidus habka" ku saabsan Dhaqdhaqaaqa Celceliska.
Istaraatiijiyad caan ah oo loogu talagalay ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah.
vfxAlert wuxuu u shaqeeyaa sidii oscillator xaqiijin ah. Sawirku wuxuu muujinayaa dhammaan shuruudaha loogu talagalay CALL-ikhtiyaar: calaamadda RSI ee soo noqoshada, qiimaha ayaa ka sarreeya dhammaan Celceliska Dhaqdhaqaaqa.
Qiimaha "Awoodda" kuma filna in la furo ikhtiyaar iyo Celceliska Dhaqdhaqaaqa wuxuu muujinayaa dhaqdhaqaaq dhinac ah. Waxaan eegaynaa “Khariidadda madaxa” - waa arrin “diiran”. Waxa loola jeedaa? Jawaab: isbeddelka ayaa bilaabmi doona dhowaan; ganacsaduhu waa inuu diyaar u ahaado inuu furo.
Istaraatiijiyadda "Hal tilmaame + vfxAlert".
Tilmaamaha Ichimoku Kinko Hyo wuxuu u shaqeeyaa sidii istiraatiijiyad ganacsi oo adag, uma baahna aalado farsamo oo dheeri ah.
Kaliya ku dhaaf daruuraha "Kumo"; khadadka intiisa kale ka saar. Waxaan fureynaa ikhtiyaarka kaliya kadib marka qiimaha uu jabo xadka kore / hoose ee Kumo iyadoo la xaqiijinayo astaamaha isbeddelka vfxAlert.
Dhammaan shuruudaha loogu talagalay PUT-option: qiimaha ka hooseeya xadka hoose ee Kumo, calaamadda "celceliska" on vfxAlert.
Suuqa farqiga u dhexeeya, tilmaamaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ayaa kugula talinaya furitaanka heshiisyo ku saabsan xiritaankiisa. Bilaabayaasha ganacsaduhu waxay sameyn karaan qalad caadi ah iyagoo si adag u raaca mabda'a: qiimaha ayaa ka sarreeya Kumo, shumacyo kor u socda ayaa xiraya farqiga. Astaamaha daciifka ah ee vfxAlert ayaa joojiya xulashada CALL-option; qiimaha wuxuu ku noqonayaa Kumo oo wuxuu u bilaabayaa dhaqdhaqaaq dhinac ah.